Kiisaska Covid-19 ee India oo kor u dhaafay 8.8 Milyan | Radio Himilo
Home / COVID 19 / Kiisaska Covid-19 ee India oo kor u dhaafay 8.8 Milyan
Kiisaska Covid-19 ee India oo kor u dhaafay 8.8 Milyan
Posted by: Sadia Nour 15 days ago
Himilo – Tirada guud ee kiisaska cudurka Covid-19 ee India ayaa kor u dhaafay 8.8 milyan, xilli wadankaasi laga diiwaan galiyay 24-kii saac ee danbeysay 41,100 kiis, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka dalkaasi.
Wasaaradda ayaa xustay in ugu yaraantii 447 ruux ay u geeriyootay, taasi oo tirada guud ee dhimashada ka dhigeysa 129,635.
Sideed maalin oo xiriir ah ayaa laga soo warinayay dalkaasi kiisas ka hooseeya 50-kun, waxeyna wasaaraddu ku sifeeysay ififaalo wanaagsan oo muujineysa in tirada dadka qaadaya feyruska corona ay is dhimeyso.
Inkastoo uu hoos u dhacaasi jiro guud ahaan India, hadda waxaa jira magaalooyinka laga diiwaan galiyay kiisas ka badan kuwii hore sida caasimadda Delhi ee xudunta u ah feyruska. Iyada oo ay taasi jirto haddana waxaa balaayiin ruux oo Indian ah ay u debaal degayaan munaasibadda sanadlaha ah ee diiwaanli, taas oo dadka kulmi si ay u muujiyaan wadajir.
Previous: Muxuu yahay xalka loo helay libaaxyada lo’da weerara?
Next: Inter Milan oo hoos u dhigtay dalab kaga imaanaya Liverpool, Man United iyo Arsenal.